ပီနန်ဆရာတော်ကြီး ၏သြ၀ါဒ(၁၂-၁၀-၂၀၁၁) - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on October 27, 2011 at 8:17pm
"How are you?"လို့ လူတွေ နှုတ်ဆက်ကြတယ် မဟုတ်လား။ ဘုရားရှင် ရဟန်းတော်တွေကို
အခု စင်္ကာပူမှာ သီတင်းသုံးကြတဲ့ ကျောင်း(၁၂)ကျောင်းက သံဃာတော် (၄၂)ပါး၊ သီလရှင်ကျောင်း(၂)ကျောင်းက ဆရာလေးနှစ်ပါး၊ စင်္ကာပူမှာ ရောက်နေကြတဲ့ ဒကာဒကာမတွေရော သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း စည်စည်ကားကား လုပ်နေကြတာ ညီညွတ်ကြဖို့၊ မေတ္တာထားကြဖို့ပဲ။ အခုလုပ်တဲ့ ပ၀ါရဏာပွဲဆိုတာ ဖိတ်ကြားတဲ့ပွဲ။ အပြစ်မြင်ရင် ပြောကြဖို့ ဖိတ်ကြားတာ။ ခုနက သံဃာတော်တွေ သိမ်ထဲမှာ ဖိတ်ကြားကြတယ်။ ဘုန်းကြီးက အကြီးဆုံးမို့ ပထမဆုံး ဖိတ်ကြားရတယ်။ လူကြီးဆိုပြီး မဖိတ်ကြားလို့ မရဘူး။ အားလုံး ဖိတ်ကြားရတယ်။ “အရှင်ဘုရားတို့ . . . တပည့်တော်ရဲ့ အပြစ်ကို မြင်မိရင်၊ ကြားမိရင်၊ တပည့်တော်မှာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ သံသဖြစ်မိရင် တပည့်တော်ကို သနားသောအားဖြင့် ပြောကြပါဘုရား။ အပြစ်ရှိရင် ၀န်ခံပါ့မယ်ဘုရား”လို့ ဖိတ်ကြားရတယ်။